BONISWA MOHALE | March 19, 2020
UGQUGQUZELE abesifazane ukuthi bangene emkhakheni wokweluleka ngezezimali uNksz Lwandle Zungu (32) osiza asebezothatha umhlalaphansi ngokubacebisa ngamasu ezezimali.
UNksz Zungu ongumeluleki wezezimali enkampanini Inkunzi Wealth Group, uthi umsebenzi wakhe usiza izinkumbi zabantu ukuthi zibe nolwazi lokuphatha imali.
Le ntokazi yaseNewlands West iveze ukuthi yafunda eNewlands East Secondary yadlulela eMilpark Business School lapho yenza khona iziqu zeFinancial Planning.
“Emuva kokuphothula * -matric, ngasebenza ebhange ngase ngibona ukuthi nginothando lokululeka abantu ngezezimali.
“Isizwe sethu asijwayele ukonga imali, kuthi noma sesithatha umhlalaphansi sibe nenkinga yokuthi imali isheshe iphele. Umsebenzi wami wukululeka abantu ngemali yabo yomhlalaphansi ukuze bayitshale ibalondoloze isikhathi eside,” kusho uNksz Zungu.
Uthe kumphatha kabi ukuthi uma eya ezithangamini zokucobelelana ngolwazi lwezezimali uvamise ukufica abeluleki bezimali bamadoda kube nguye yedwa owesifazane.
“Umsebenzi wokululeka ngezezimali ukahle, udinga umuntu ofunde iMaths, Accounting neBusiness Studies. Kubalulekile ukuthi silulekane ngokwezezimali ukuze isizwe esimnyama sifunde ukonga nokuzakhela umcebo. Inkunzi Wealth Group isiza abantu ngokubatshengisa imikhiqizo ehlukene ibheke isimo sabo bese ibasiza ukulondoloza imali yabo,” kusho uNksz Zungu.
Uthe akakuthandi ukubona abantu behlukumezeka ngenxa yezinqumo ezingaphusile abazenza ngemali yingakho ehambela imiphakathi ehlukene.
Uphinde waveza ukuthi kunezivivinyo zamabhodi okumele uhlale kuwona uma ungumeluleki wezezimali ngoba ukululeka abantu ngezimali ngumsebenzi obalulekile. Udonse abantu ngendlebe ukuthi batshale imali yabo ezinkampanini ezigunyaziwe ukwenza lo msebenzi, hhayi emabhanoyini.
Le ntokazi inezingane ezimbili okuyindodana eneminyaka eyisishiyagalolunye nentombazane eneminyaka emihlanu.
Ithe ifundisa izingane zayo ukonga imali ngoba naseChina izingane zifundiswa ngobuchwepheshe zisencane yingakho zigcina seziwongoti kwezobuchwepheshe.